Faahfaahin ku saabsan Qaraxii xoogaanaa ee Muqdisho ka dhacay iyo Khasaaraha ka dhashay oo.... - Caasimada Online
Home Warar Faahfaahin ku saabsan Qaraxii xoogaanaa ee Muqdisho ka dhacay iyo Khasaaraha ka...
Faahfaahin ku saabsan Qaraxii xoogaanaa ee Muqdisho ka dhacay iyo Khasaaraha ka dhashay oo….
Gawaarida Gurmadka degdega ee Ambulanceka ayaa wali ku sii qulqulaya Goobta qaraxa uu ka dhacay, Waxeyna daabulayaan dadka Dhaawacyada qaba iyo kuwa meydka ah ee Qaraxa waxyeeladiisa ay soo gaartay.
Warar is Khilaafsan ayaa ka soo baxeysa qaabka qaraxa uu udhacay, Wararka qaar waxa ay Sheegayaan in qof watay gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyay walxaha Qarxa uu isku qarxiyay Goobta, Halka warar kalena ay sheegayaan inuu qarxiyay Gaari looga tagay ka soo Horjeedka Hoteelka Wehliye.
Ciidamada amaanka ee Dowladda ayaa qaraxa kadib isku gedaamay goobta, Waxeyna dadka udiidayeen iney meesha udhawaadaan, iyadoo mararka qaarna la maqlayay rasaas ay ridayeen Ciidamada amniga.
Wadada Maka Al-Mukarama ayaa ka mid ah waddooyinka ugu mashquulka badan, waxaana ku yaalla Hotelada ugu caansan oo ay degaan siyaasiyiinta iyo Mas’uuliyiinta dowladda.